China DRK-FX-306A atingkpọ oku ọkụ ụlọ ọrụ na ndị nrụpụta | Drik
Ezigbo mgbochi abrasion, ndụ ogologo, ịdị larịị na ịnweta maka nhicha.
Nnukwu ebe kpo oku, iji kwado nhazi nhazi nnukwu.
The detached imewe maka akara mode, pesonel na-arụ ọrụ njikwa na-anọghị acid alụlụ, mma ma na-adaba adaba.
Platinum eguzogide na-achịkwa okpomọkụ n'ụzọ ziri ezi ma na-ekpo ọkụ ngwa ngwa na n'ụzọ ziri ezi, na ọnọdụ okpomọkụ dị 400 ℃
Nnukwu LCD screan, gosipụta nke ọma.
Okpomọkụ akpachapụ anya ngosi (ọkụ ọkụ dị elu karịa 50 ℃, oriọna na-emenye ụjọ), nchebe ọzọ.
Performance tụnyere nke dị iche iche kpo oku elu ihe
Ọrụelu Okpomọkụ(Ọgwụgwụ Elu) Nguzogide corrosion Nweta nhicha
Efere iko nke Efere 400 ℃ igwe anaghị agba nhicha ozugbo ihichapụ
Igwe anaghị agba nchara 400 ℃ mfe nchara, ndụ dị mkpụmkpụ nchara nchara, siri ike nhicha
Chemical seramiiki mkpuchi elu 320 ℃ mfe nchara mgbe mkpuchi abrasion adịghị mfe ihicha
Igwe mkpuchi Teflon 250 ℃ mfe nchara mgbe mkpuchi abrasion siri ike ihicha
Enwere ike iji ya mee ihe na nyocha ngwaahịa ugbo, nyocha ala, nchedo gburugburu ebe obibi, ule mmiri, kọleji na mahadum, ụlọ ọrụ mmepụta ihe na ụlọ ọrụ ndị ọzọ, ụlọ ọrụ sayensị na ụlọ ọrụ ndị ọzọ. Ọ bụ ezigbo onye inyeaka maka ikpo ọkụ, mgbaze, esi nri, mkpofu acid, okpomọkụ mgbe niile, mmiri, wdg. , nkuzi, nyocha sayensị, wdg.
Atingkpọ ihe ndị dị n'elu ala seramiiki iko.
Gba mmiri ọkụ 500 mm × 400 mm.
Ọnọdụ okpomọkụ okpomọkụ ụlọ - 400 ℃.
Ọnọdụ okpomọkụ ℃ 1 ℃
Okpu nha nke oma ± 0.2 ℃
Njikwa mode apụ PID nwere ọgụgụ isi ịchịkwa mmemme.
Oge ntọala oge 1min ~ 24 hr.
Ịnye ọkụ 220v / 50 Hz.
Ibu ibu 3000 W.
Nke gara aga: DRK-FX-306 Igwe efere
Osote: Igwe ọkụ eletrik mechiri emechi
DRK-DTC ọgwụ nnwale ụlọ nyocha (Ọhụrụ)
Klọ Ule Aging DRK-CY Ozone